Bendi waalka waalka MAYA. 3P43, oo ku taal Shanghai Automechanika intii lagu jiray 03 / 12-06 / 12/2019
Bendi valve wuxuu kaqeyb qaatay Automechanika Shanghai 2019 Magaca Bandhigga: Automechanika Shanghai 2019; Cinwaanka: Xarunta Bandhigga Qaranka iyo Shirarka (Shanghai) (NECC); Taariikh: Diseembar 03-06, ...
Bendi waalka waalka MAYA. 3P43, oo ku taal Shanghai Automechanika intii lagu jiray 28 / 11-01 / 12/2018
Magaca Carwo: Shanghai Frankfurt Auto Parts Exhibition 2018 Address: Shanghai National Convention and Exhibition Center Taariikhda: Nofeembar 28 - Diseembar 01, 2018 Magaca bandhiga: Taizhou ben ...
Bendi waalka waalka MAYA. 3P43, oo ku taal Shanghai Automechanika intii lagu jiray 29 / 11-02 / 12/2017
Bendi waalka ayaa kaqeyb qaatay Automechanika Shanghai 2017 Magaca Bandhigga: Automechanika Shanghai 2017; Cinwaanka: Xarunta Bandhigga Qaranka iyo Shirarka (Shanghai) (NECC) Taariikhda: Nofeembar 29-Dece ...
Bendi waalka waalka MAYA. 3C44, gudaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Guangzhou intii lagu jiray 04 / 9-06 / 9/2017
Magaca Bandhigga: 2017 Gawaarida Gawaarida Caalamiga ee Guangzhou iyo Bandhigga suuqa kadib Goobta: Guangzhou Poly World Trade Expo (Hall 1-6) Waqtiga: Sebtember 4-06, 2017 Magaca soo bandhige: Taizhou bendi Val ...
Bendi waalka waalka MAYA. 3H62, oo ku taal Shanghai Automechanika intii lagu jiray 02 / 12-05 / 12/2015
Magaca Carwo: 2015 Shanghai Frankfurt Auto Qaybaha Carwada Cinwaanka: Shirka Caalamiga ah ee Shanghai iyo Xarunta Carwo Taariikh: Diseembar 2 - Diisambar 05, 2015 Magaca bandhiga: Taizhou ben ...
Magacaabista Mashiinka Mashiinka
Badi matoorrada mashiinnada waxaa loogu talagalay inay yihiin noocyo fandhaal ah oo nooca loo yaqaan 'poppet style' sababo la xiriira dhaqdhaqaaqooda kor u kaca iyo hoos u dhaca waxayna muujinayaan madax waal madax leh oo ku habboon kursiga waalka mashiinka lagu xiro si loo xiro p ...
Dhamaan Waxyaabaha Ku Saabsan Mashiinka Mashiinka
Qalabka mashiinka. Sumcadda sawirka: Maksim Vivtsaruk / Shutterstock.com Mashiinka mashiinka ayaa ah qaybo farsamo oo loo adeegsado matoorada gubida gudaha si loogu oggolaado ama loo xakameeyo qulqulka dareeraha ama gaaska u socda iyo ka ...
Qeexitaanka Qalabka Mashiinka
Farsamooyinka mashiinka caadiga ah waxaa lagu qeexaa xuduudaha hoos ku xusan. Xusuusnow in xogtaan loogu talagalay ujeedooyin macluumaad isla markaana la soco in kala duwanaanshaha xuduudaha loo isticmaalo qeexida eng ...
Noocyada Mashiinka Qaliinka
Marka laga soo tago astaamaha aaladaha matoorrada ee shaqeynaya (qaadashada iyo qiiqa), waxaa jira dhowr nooc oo gaar ah oo matoorrada mashiinnada oo ku saleysan qaabeynta iyo walxaha. Noocyada aasaasiga ah ee e ...
Mashiinka matoorrada ayaa ka mid ah qaybaha ku jira mashiinnada isku-gubidda gudaha oo aad u walaacsan. Baahida loo qabo hawlgalka mashiinka lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in mashiinka mashiinka awood u leeyahay inuu muujiyo iska caabin ...
Dhaqdhaqaaqa matoorrada mashiinka waxaa wata gawaarida mashiinka, kaas oo ka kooban taxane taxane ah ama cambooyin u adeega abuurista dhaqdhaqaaqa toosan ee waalka ka wareega wareegga 'camshaft'. ...
by admin on 10-10-06
Afarta stoke ama matoorrada afar-wareega ah ee matoorrada gubashada gudaha waxay adeegsadaan laba nooc oo aasaasiga u ah kala-goysyada - waalka qaadashada iyo waalka qiiqa. Farsamooyinka galitaanka ayaa loo furay si loogu oggolaado qulqulka isku dhafka hawada / shidaalka ...